Aka akparala onye oziọma zuru ohi n’Ibadan | odumblog
Aka akparala onye oziọma zuru ohi n’Ibadan
posted on Aug. 16, 2019 at 2:14 pm August 16, 2019
Onye oziọma nke aha ya bụ Mz. Akinjide Durojaiye ka egburu ilu na Tọzde n’ihi na o zuru chara chara ekwenti Tecno abụọ nke ruru puku naira iri asaa n’ụlọ ahịa di n’ime ụlọ Femi Johnson nke di na Dugbe, Ibadan.
Onye ozi a kwuru na o si Dominion Assembly nke dị n’Ilare-Ijesa, Osun State bia igbasa ozioma n’ụlọ ahịa ebe a na-ere ekwenti na ngwa ya. O kwuru na ọ bụ mmụọ nsọ nyere ya ntuziaka iga na ya bụ ụlọ ahia.
Otu onye na-ere ahia n’ụlọ ahịa ahụ, Tunde, kwuru na ha ahụghị mgbe onye ozi a were ekwenti ndi ahụ n’ihi na obi ha tọrọ n’okwu chukwu ọ na-agwa ha.
Mgbe ejidere nwoke a, a kụrụ ya ihe tinka kụrụ panụ.
Onye ozi a kwuru na ọ bụ ekwensu tinyere ụdị echiche n’isi, tinyekwara nwa ya di afọ asaa nke si n’ụlọ elu daa.
E mechara hapụ nwoke a mgbe ndi mmadu bịara tinye ọnụ n’okwu ahụ.
Tags:AfricaBBCbbc newsBIAFRAbreaking newsBuhariChannelsDaily postEducationfootballFULANI HERDSMENIgbo NewsIgbo songsLatest newsNaija celebritiesNGA vs SOUTH AFRICAOdumblogOdumblog newspolicePoliticsPolitics NigeriaPremium TimesRUGASahara Reporters
Onuorah Jennifer August 16, 2019
Gọọmentị Ogun Steeti ebidola inye ndi ntorobia ọrụ